Ha ku xirin 'maaskaro khaldan' tareenka Eurostar!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » Ha ku xirin 'maaskaro khaldan' tareenka Eurostar!
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Saraakiisha booliiska Faransiisku waxay tareenka Eurostar ka saaraan rakaabkii British -ka ahaa ee aan xasiloonayn oo xiran 'maaskaro nooca khaldan' ah, wayna xireen, ka dib markii ay istaageen gurmadka degdegga ah ee Lille.
Tareenka Eurostar ayaa lagu qasbay inuu istaago gurmad degdeg ah oo ku yaal Lille, France rakaab aan u hoggaansamin.
Rakaab tareen oo British ah ayaa laga saaray tareenka, waa la xiray kadib markii ay isku dhaceen maamulaha tareenka Eurostar.
Rakaabkii wuxuu noqday mid gardaro iyo cabsi geliyay kooxda diyaaradda saarnaa, sidaas darteed booliska ayaa loo yeeray.
Saraakiisha booliiska ee hubaysan ayaa si qasab ah uga saaray rakaab lagu eedeeyay inuu xirtay 'nooca khaldan ee maaskaro' tareenka Eurostar ka dib markii uu si degdeg ah ugu istaagay Lille, France habeenimadii Khamiista.
The Tareenka Eurostar ayaa ka soo safraysay Paris Gare du Nord kuna sii jeeday St. Pancras galabnimadii khamiista laakiin waxaa lagu qasbay inuu si degdeg ah u istaago Lille ka dib markii la sheegay in maamulaha tareenka uu muran aad u kulul la galay musaafiriin British ah Liverpool ku daboolan maaskaro wejiga, sida ay sheegeen rakaabkii tareenka.
Iska-horimaadka ka dib, maareeyuhu wuxuu sheegay inay ku wargelin doonaan booliiska Lille guul-darradiisa inuu raaco qawaaniinta COVID-19, iyadoo tareenku uu sameeyay xaalad degdeg ah, joogsi aan la qorsheyn oo saldhigga halkaas oo siddeed sarkaal ay xoog ku kaxeeyeen rakaabkii.
Markii uu ka baxay tareenka, Ingiriiska, oo loo malaynayo inuu ku jiro 40 -meeyadii, wuxuu ku andacooday in lagu eedeeyay "inuusan xirnayn maaskaro nooca saxda ah" oo hadda "keligiis looga tagi doono Faransiiska," isagoo ugu yeeray "daaweyn aad u naxariis daran."
Afayeen u hadlay Eurostar wuxuu difaacay jawaabta xaaladda, isagoo ku andacoonaya in "rakaabku uu noqday mid dagaal badan oo cabsi geliyay kooxda saarnayd" ka dib markii ay xusuusiyeen xeerkooda ku saabsan xirashada maaskaro, sidaas darteedna, "laga codsaday inuu ka tago tareenka saldhigga Lille. . ” Iyada oo la raacayo “nidaamka caadiga ah” ee shirkadda ayaa askar booliis ah loogu yeedhay “inay yimaadaan oo caawiyaan.”
Booliiska Faransiiska ayaa xaqiijiyay in ninkan loo xiray dhacdada tareenka laakiin ma bixin wax war ah oo dheeri ah oo ku saabsan xaaladda.
Eurostar waxay ku qortay boggeeda internetka in dhammaan rakaabku ay tahay inay xidhaan wejigooda dabool tareenada, xitaa haddii si buuxda loo tallaalay, kuwa u hoggaansami waaya waxaa suuragal ah in loo diido safarka. Tilmaamaha shirkadu ma sheegaan nooca maaskaro loo baahan yahay, kaliya waa inay daboosho afka iyo sanka rakaabka.